Ihlabathi elilungileyo kunye noonxibelelwano kwi-Intanethi
Kutheni ukuthetha phakathi kwabantu beyinyani kuba yinyani? Ukuthetha kunye nekhompyutha kulula kakhulu. Ihlabathi elikhethekileyo kunye noonxibelelwano kwi-intanethi kuye kwadume kakhulu kangangokuba ngamanye amaxesha abantu abaninzi bayalibala ngokuthetha kwangempela. Intlanganiso yangempela ibeka abantu kwisikhokelo esithile, yenza ukuba kuhanjiswe umnxeba, kwaye iNethiwekhi ihlala isondele.
Ukunyamezela ezimbini iitshixo - kwaye sele usephakathi koqhagamshelwano. Ufuna ukuqinisekisa ukubaluleka kwakho - uvule iphepha kwi-Odnoklassniki, ubukele ukuba bangaphi abantu abaye bayityelela, baqinisekiswe ngokwabo. Ngaphandle koko, ukuhlala kunye nokusebenza (ukuba umsebenzi udibaniswe nekhompyutheni) uyamangalisa, kwaye ukuze ulungise ixesha, abantu baya kwilizwe elithe tye kwaye bathetha kwi-Intanethi, apho kuhlale kukhuselekile, akukho mbopheleleko, unokuzicingela njengonobani, udibanise ubulumko babanye kwaye ukufumana kulo mqhumo weemvakalelo.
Ziziphi iingcingo ze-intanethi?
I-intanethi yehlabathi jikelele yehlabathi elithe tye kunye noonxibelelwano kwi-Intanethi bayakhupha kwaye kubangele ukuxhomekeka kwezonyango kubasebenzisi. Abantu banomnqweno omkhulu wokungena kwi-intanethi, kakuhle, ukuba bangene kuwo, umntu akafumani amandla okushiya amaphepha ewebhu. Kukho iifom ezimbini ezibalulekileyo zehlabathi kunye nezonxibelelwano kwi-intanethi: kuxhomekeke kwingxoxo-ukusuka kwingxoxo, iifom, i-teleconferensi, i-imeyile. Kwaye i-web addiction - ukusuka kwimiqathango emitsha yolwazi (ukukhangela kwi-sites, ii-portals nezinto). Nangona kunjalo ininzi ye-Intanethi-kuxhomekeke kwiinkonzo ezinxulumene noqhagamshelwano. Ngokwezibalo, iimpawu ezintle kakhulu ezinxibelelwano zingabonakali (86%), ukufikeleleka (63%), ukhuseleko (58%) kunye nokukhululeka kokusetyenziswa (37%). Ngoko inethwekhi iyadingeka ukufumana inkxaso yezenhlalakahle, ukuxhaswa ngokwesondo, ithuba lokudala iqhawe elibonakalayo (ukudala umntu omtsha).
Yiyiphi intsingiselo yokuxhomekeka kolwazi?
Kukwabizwa ngokuba ngumlutha webhubhu. Ngokuqhelekileyo, ichaphazela abantu abachaphazelekayo kunye nohlobo lomsebenzi ngokucwangciswa nokufunyanwa kolwazi (intatheli-ndaba iyona yokuqala kwiqela leengozi). Baziva bekunqongophala kweendaba, ukungathandeki kokuqonda ukuba ngaloo nto into into eyenzekayo kwindawo ethile, kwaye ayifumanga. Ukuqonda ukuba akunakwenzeka ukugubungela yonke into, iyalala. Ingqiqo ayinalo umda: emva kokuba enye ingcamango ifike enye, yesithathu ... Ukuze unqande ngexesha, kufuneka ube nephakathi kwe-hick ebizwa ngokuba yi-sting-accumulation of power, umoya kunye nenjongo. Yenziwa kuyo nayiphi na imisebenzi. Oku kukwazi ukuhlangana ngexesha elifanelekileyo, gxininisa kwaye uqondise yonke imikhosi ukuphumeza umsebenzi othile. Ulwazi lugxininisa ingqalelo, ingqiqo yexesha ilahlekile, i-chewing gum iphoswe ebuchosheni, efuna ukukhangela. Ukuqinisekisa ukuba ulwazi aluyikutshabalalisa ingqondo ekugqibeleni, imbonakalo yembono iyimfuneko. Ndafunda ingcamango ethile, yaphefumlelwa yiyo kwaye yayiqonda. Kuyimfuneko ukucwangcisa zonke iingcinga ngokulandelelana, kodwa kuphela ezo ezibhenela kumphefumlo. Yaye, ukuba kunokwenzeka, bawasebenzise, ​​kwaye musa ukupheqa kwintloko yakho.
Indlela yokuchazela ukuthandwa kwamanethiwekhi asekuhlaleni : "Abafundi", "VKontakte" kunye na?
Umntu kufuneka ahlolwe ngaphandle, uqinisekise, nokuba ulandele ubomi ngokuchanekileyo, ukuthelekisa nabanye. Kwi-intanethi yentlalo, umsebenzisi uqala iphepha lakhe lomntu - umfanekiso omhle-ukuzimela. Abantwana, amadoda, ukuphumla, abantwana bathandwa, banqwenela, bavuyisana, imibongo ibhaliwe omnye nomnye, ukuqikelela ubungqina babo nobuhle obonwabileyo. Ngaloo ndlela, imfuneko yokuqinisekisa ukubaluleka komntu idibeneyo. Nangona kunjalo, intanethi yentlalo ifanekisela. Kwiphakamiso yentlanganiso yangempela, bambalwa abasabelayo, kwaye ukuba intlanganiso iyenzeka, kaninzi kuvela ukuba ayikho into ecacileyo kwaye enhle njengelona hlabathi.
Unxibelelwano lwe-intanethi luhluke njani ngoku?
Umntu akahlali nolonwabo yedwa, sihlala sinomnqweno wokwabelana ngezinto eziphambili - ezo ezinokuthi zixelelwe kuphela kumntu. Sisabela kwiimvakalelo kuphela kwintetho enomdla - sisinomotheka, sisabela ngovelwano ngenxa yentlungu. I-Intanethi idala ukukhohlisa kokuthetha ngokubanzi. Amagama amabini, iingcamango zibhaliwe, kukho ukuvakalelwa kukuba ingqondo, efuna ukunyanzelana, ilandela into. Kodwa oku kuyingcamango. Iingcali zeengqondo ziqhathanisa ukunxibelelana kwiwebhu kunye nokukhwabanisa ngengqondo. Ukongezelela, ubudlelwane obunzima bukwenza kube nzima ukwenza okwenene. Enyanisweni, abaninzi abasebenzisi bayavuma ukuba banengxaki ngoqhagamshelwano lokwenene. Ihlabathi elithe tye kunye noonxibelelwano kwi-Intanethi kwenza abanye abantu bahlale kwilizwe labo elikhohlisayo, abayakhele kwaye balilondoloze ngamandla abo onke. Bayesaba ukuba abayi kugxekwa nangayiphi na indlela, bathi hatshi, abazange bagxeke kwaye abazange bakhulume. Ukungabikho kwempendulo ephilayo kukuvimbela umntu ekuphuhlisweni. Emva koko, ukuqonda ukuba ezinye iinkalo zobomi zidinga ukutshintshwa okanye zivumelane nento ethile, kunzima kakhulu. Kwi-intanethi, kubonakala ngathi silahlekelwa sisulu . Kodwa, ukulondeka, kungaphakathi kwethu, kwaye akukho ndawo apho ungeke ubaleke kuso. Kwaye kufuneka ube nenkalipho yokuhlala kuyo kwaye ufuna indlela yokuphuma kuyo.
Ziziphi iimpawu ze-intanethi?
Unolwazi olugqithisileyo: umnqweno omkhulu wokujonga i-imeyile yakho, ukungawunaki iimfuno zomzimba ngenxa yokungena kwi-intanethi (ukhohliwe ukutya, ukuya kwindlu yangasese), ukuhlala kwiwebhu kuninzi ixesha elide elicetywayo ekuqaleni (ndifuna ukuhamba isiqingatha seyure kwaye ndahlala ezimbini). Ikhompyutha iyalutha ngamava ukulibala malunga neentsapho, ubuhlobo, imisebenzi esemthethweni. Imiphumo yomtshato, ukuxothwa emsebenzini, ukuhluleka kwezemfundo. Emva kokushiya iNethiwekhi ngexesha elincinci, bafumana uhlobo lwe "hangover" - umgca obunzima kakhulu wokuqonda kunye nomoya wokuxhalaba, umnqweno ongenakunqwenelekayo wokungena kwakhona kwihlabathi elithe tye kwaye uxhumane kwi-intanethi.
Ziziphi iingxaki zengqondo ezinokubangela ihlabathi eliqinileyo kunye noqhagamshelwano kwi-Intanethi?
Umntu omdala ubonakala efana nomntwana oneminyaka ezisixhenxe ofuna ukufumana oko akufunayo le ngcaciso emfutshane. Esinye isifo sengqondo sisisifo sikaMunchausen. Isekelwe kwisimo sokufanisa isifo ukuze ukhange ingqalelo kunye novelwano. Ekubeni kwi-intanethi akukho mntu uya kucela kuwe ikhadi lezokwelapha, ukudlala umntu ogulayo ngumcimbi olula.
Ngubani osengozini yokuba ngumlutha wekhompyutha?
Kukho uhlobo olubizwa ngokuba ngumxhomekeke kubuntu. Abantu abakhe bangaxhomekeka kwi-intanethi, ukutya, utswala okanye iziyobisi. Abazi ukuba bayenqaba njani kwaye benze izigqibo, banokwesaba ukugxekwa okanye ukungavumi. Ziyakhathazwa ngoloyiko lonwabo kunye nomnqweno wokulahla onke amandla abo, ukuba bangakwazi ukwabelana nabanye ngamava abo, ukungakwazi ukucwangcisa ixesha labo nokufezekisa iinjongo zabo. Aba bantu banamacandelo amaninzi. Namathisela umntu kwiwebhu kubo, akukho nto imele. Ngomgama kubonakala ngathi umnxibelelwano uyathandeka kuwe, uvale kwaye uqondakala, ulungele ukumnceda yonke indawo nakuyo yonke into. Kodwa ebomini akukho nto isoloko ngokomoya okwaneleyo ukuqonda nokuxhasa umntu.
Ihlabathi elibonakalayo lichaphazela njani impilo nempilo yengqondo yabantwana?
Umntwana uneminyaka engama-7 ukuya kwe-10 ubudala kufuneka akhule ngokomzimba-kumdlalo, ukunyakaza. Emva komda weminyaka elishumi, amandla omzimba agxininiswe ekuphuhliseni imetabolism, intliziyo, imiphunga kunye nezinye izitho ezibalulekileyo. Kwaye emva kweminyaka eyi-14 yokwamkelwa kuyashintsha kwizinto zokomoya. Abantwana abancinci, ababoshwe kwi-monitor Esikhundleni senkqubela yomzimba kule minyaka, kukho umthwalo wengqondo - ngenxa yoko, abantwana banamhlanje baqala ukudala. Kwiminyaka eyi-13 ukuya kwe-14 ubudala, sele kusekhona iimpahla ezixhasayo, i-atherosclerosis kunye ne-early cancer. Kwiminyaka elishumi umntwana angakwazi ukuthetha iilwimi ezintathu kunye neziseko zeprogram yekhompyutheni, kodwa akadluli uvavanyo lwebhanti ekuphuhliseni ngokwenyama: ngokugqithisa umgangatho omnye uze ufumane ibhola kwiinjongo.
Ihlabathi elikhethekileyo kunye noonxibelelwano kwi-Intanethi libizwa ngokuba luncedo oluninzi njengeendlela zokufunda nokwandisa ukukhanya. Mhlawumbi, kunye nesilinganiso esifanelekileyo, ngaba kuya kunceda ukukhulisa abantwana abanezikhulu?
Abazali bachukumiseka, bebukele umntwana wabo oneminyaka emithathu ephethe nge laptop. Enyanisweni, zonke ezo zakhono zenziwe kwinqanaba elingaphezulu kwaye aziyi kuba luncedo kwimpilo yabantu abadala. Kulula kubantu abadala ukuba bafake umntwana kwikhompyutha baze bathathe ixesha elide kunokuba benze ezinye ixabiso kuyo. Ingcamango yokuba ikhompyutha iyaqhubeka kwaye iyimfuneko yesikolo ayikho into yokuzilungisa.
I-USA yenza uvavanyo : abantwana abaneminyaka engama-5 baqeqeshwa ngaphandle, kwaye baneminyaka eyi-12 begqibile ikhosi ephakamileyo yemfundo yesibini. Baye balandela ubomi babo iminyaka emininzi. Kwaba ngathi akukho namnye kubo owayenomphefumlo: ngobuchule babenobungcali, kodwa izinto ezinqwenelayo kunye neengqondo azikho. Babengazi ukuba ngubani okanye babefuna ntoni. Emva kwakho konke, italente ngu-99% abasebenzi kunye nokukwazi ukuzicwangcisa, kwaye i-1% kuphela ixhomekeke kwizakhono.
Ngaba kunokwenzeka ukuthoba imithetho yokuziphatha ephephile kubantwana kwikhompyutha?
Ukufikelela kwiminyaka eyi-10 umntwana uhlala ebumbene kunye nehlabathi, kuye igunya labazali liphela. Emva kokuba abantwana abalishumi baqala ukuhlukana nabo kwihlabathi elibangqongileyo, bazibuze ukuba konke kulungile kule nto, ukuba banomdla: yintoni eyadlulileyo, yintoni ikusasa. Leli lixesha xa unako ukujoyina ikhomputha. Isilinganisi esifanelekileyo asikho ngaphezu kweeyure ezimbini ngosuku: imizuzu engamashumi amane anesihlanu kwikhompyutheni, kwaye ikhefu lokuphumla. Awukwazi ukusebenzisa ikhompyutha njengendlela yokukhuthaza. Kubalulekile ukuba ungadli, ungavali izixhobo ukusuka kwinethiwekhi, kodwa uhlakulele ukuzithiba kumntwana. Fumana i-alamu ngexesha elithile kwaye uyibeke ngokulandelayo-ngoko umsebenzisi omncinci uya kuba nomthwalo wemfanelo kwizenzo zabo. Ngokuqhelekileyo, abazali ngokwabo baxhomekeke kwikompyutha. Emva kwakho konke, njengokuba namhlanje usichitha ixesha elingenamntu intsapho encinci: ubaba udlala kwezinye "umqhubi", kwaye umama uthetha nabahlobo kwi "Classmates." Yintoni ehleliyo kumntwana? Hlala kwakhona kwikhompyutha.
Ziziphi iingxaki zempilo yabasetyhini ezinokukhokelela kwiikhomputha zekhompyutha, ihlabathi kunye nezonxibelelwano kwi-intanethi?
Ukungabikho kokungahambi kunye nokulahlekelwa ngamatyala kukuxhamla kwabasetyhini, aboshwe kwi-esweni. I-Hypodinamia kunye neentshukumo eziqhubekayo kwindawo ye-pelvic zivula amasango kuzo zonke iintlobo zokuvuvukala. Ngokuqhelekileyo, ulwazi oluvela kwiNethwekhi yabasetyhini lubangele i-neuroses, ingakumbi kubaomama abaselula abafuna iimpendulo kwimibandela yabo kwi-Intanethi. Namhlanje zonke iintlobo zeengqungquthela ze "Mama" ziyaziwayo, apho ezinye, oomama abangafaniyo (ezinye ziza kuba luncedo ukujonga isimo sempilo yengqondo) ngokungachazwanga banike iingcebiso "zabo oogxa". Ezinye iziphakamiso zifana nokuhlola okuyingozi kubantwana babo. Amaninzi amaninzi ayatshitshisa abalingani abakhohlakeleyo, abeke ukungabi nakubantwana babo. AmaMama aqala ukuzikhupha, enza i-neurosis enkulu.
Ukuthintana kwe-intanethi kwiintanethi kuyathandwa namhlanje . Ngaphandle kokuba uphume kwikhompyutheni, unokufumanisa ukuxilongwa kwakho, fumana inkcazo ecacileyo yonyango kwaye wuleze umyalelo wonyango kwi-pharmacy online. Zikhuselekile kangakanani ezi ndlela zokuxilongwa kunye nokonyango? Namhlanje uhlobo olutsha lwabasebenzisi be-Intanethi luye lwabonakala - i-cyberchondrics iifali ezinamandla ze-intanethi, ukuqokelela iingxoxo ngeengcali malunga nempilo yazo ecaleni kwimiba yonke yoMhlaba. Baqiniseke ukuba kukho izifo ezimbi, ezingekho ngaphezu kwesiqhamo seengcamango zabo.
Nguwuphi na umgaqo onokukhetha ngayo intengiso ye-Intanethi engathembeka kuyo?
Kukho imiqondiso emininzi okanye "ukumisa amagama" anokunika uncedo lwe-intanethi yezonyango. Yiyo yonke into edibene "nolwazi lwamandla" - i-matrices yolwazi, amanzi, i-aura, i-biofield, i-genome yomtsalane, i-astral projection, i-bioresonance okanye "ukuxilongwa kwabagqirha abangama-40 kwisiqingatha seyure", ukususwa kweetekisi kunye nayo yonke into ehambelana nayo.
Namhlanje i-Intanethi inikeza amathuba amaninzi kulabo bafuna isiqingatha sesibini. Ubuninzi beendawo zokuthandana banikela amaqabane kuwo wonke umdla kunye nombala. Uphando olusondeleyo lwakho lothando luhluke njani lokwenene?
Unxibelelwano lunokuthi luqiniseke, bathi, nantsi-yodwa kunye kuphela. Kodwa intlanganiso yobomi bokwenene idla ngokudumala. Kodwa kwi-intanethi - lawa ngamazwi nje, okungekho nto efanelekileyo. Ukutshintshiselwa kwamandla, iinzame zokuziqonda, abanye kunye neli hlabathi - azinakunxibelelwano kwiintetho zonxibelelwano. Ukuba ebomini bomntu yonke intetho yakhe ithetha ngothando, ngoko kwi-intanethi yileta nje iileta kunye neempawu.
Ziziphi izikhelo ebomini esizibuyisela ngayo ngokushiya ekutshintsheni?
Ukuze uzive ukuzaliseka koku, umntu kufuneka abonakalise kwiinkalo ezininzi zobomi. Kwindalo, umsebenzi - omnye umsebenzi wokwakha ngenzuzo yabanye, ekunyamekeleni umzimba, ophuculweyo kwaye ukhokhe ngokuphindwe kabini ngenxa yokuba unempilo kwaye baxakeke. Ngokomoya, ubuntu esiyifumanayo, intsingiselo esiyidalayo kunye neengxelo zezobugcisa. Ekusebenzelaneni nabanye abantu, oko kukuphucula nokunika ingxelo: uhlala, uyabonwa. Kwaye ukuba ngaba lo mnxibelelwano asizange sibe yinyani, abazange babeke omnye umntu iimvakalelo zabo, ukunyamekela kwabo - sishiywe sisodwa ngenxa yokwesaba ukufa. Ngenxa yokuba ngaphambi kokufa akukhathazeki ukuba yiyiphi intetho ebhaliweyo owayibhalayo, kubalulekile ukuba ngubani oza kuhamba nawe, ukuze ungabi yedwa.
Indlela yokurhoxisa umlutha ogqithisileyo?
Ubomi buhlelwe ngokulinganisela kwamandla "wokuthatha." Kwi-Intanethi, sinika amandla ethu kungabi namnye owaziyo kwaye kuphi na. Inethwekhi iyayifana nesiponji. Amandla obomi anikezwa kuthi ngeemvakalelo, kodwa kungekhona nje, kodwa ejoliswe ekusebenzeni. Yaye imvakalelo ixhomekeka kwimizi: "sithathu." Umntwana weemvakalelo kufuneka ahlangane, adibanise iimvakalelo zethu, eze ngeengcamango ezithile aze athole umthombo wamandla ukufezekisa. Umntu unako ukuziphosa kwezinye iindawo zobomi, apho kuya kuba nemvakalelo eninzi, kwaye akayi kukhumbula ngekhompyutha. Amandla angcwatyelwe kwimicimbi yinyani, izenzo zangempela kunye nokuxhamla kwangempela. Futhi i-intanethi ingaba ngumncedisi ekufuneni kwabo. Sebenzisa ihlabathi elibonakalayo njengesixhobo sokwandisa iimfuno zakho empilweni yangempela (idibeneyo). Akukho nto eya kusithatha indawo yokunxibelelana, kodwa ayiyiyo yonke into, kodwa iyinyani.
Usuku loMgaqo-siseko waseRussia 2015: uyathokoza ngevesi
Kutheni i-ruble iwa
10 izizathu zokubhoxa ebusika
Indlela yokufunda ukuba ngumhlobo omhle?
Umfazi kunye ne-intanethi
Usuku lweSicwangciso soBuchule beSigqeba se-2015: ukuhalaliswa ngokufudumele kwindinyana kunye neprose
Ukuba umntu uyaqhayisa ngamanye amabhinqa
Iindlovu ezinkulu zehlabathi
I-Urinalysis ngexesha lokukhulelwa: umbhalo
Iimvavanyo zamathoyizi zezingane ukusuka kwiminyaka eli-1 ukuya kwiminyaka emithathu
I-Wave entsha ka-2008
Iimfashiso zee-women of age
Ngaba ubisi lweenkomo luncedo kakhulu kubantwana?
Nikolai Tsiskaridze. Andiyicingi ngentsapho
I-Rice casserole nge-cauliflower kunye noshizi
Xa abazali bazibona ngokwabo kubantwana
Indlela yokucoca isisu emva kokubeleka
I-ex-soloists yeVIA Gra
Ukuxiliswa kwe-Erotic for a woman
Indlela yokukhusela iinwele ukusuka elangeni?
Indlela yokulungiselela umntwana kwi-kindergarten